पाठकवृन्द, यति खेर मेरो हातमा रिचर्ड टेम्पलरद्धारा लिखित प्रेमका नियम (The Rules Of Love ) भन्ने पुस्तक रहेको छ। पिरामिड प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित यस पुस्तकलाई विनिताजीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। मैले यस पुस्तकमा भएका प्रेमका नियमलाई अति संक्षिप्त र सरल रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। मेरो यस प्रयासलाई तपाईं विज्ञ पाठकले सकारात्मक रूपमा लिनुहुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। -मिलन आफन्त
प्रेमको नियम (२५) : ‘एक अर्कालाई प्राथमिकता दिनुस्।’
हामीलाई थाहा छ, दुई आत्माको मिलन प्रेम हो तसर्थ प्रेमी-प्रेमिका वा श्रीमान्-श्रीमतीले एक अर्कालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। एक अर्काको आत्माको आवाज सुन्नु पर्दछ, त्यसैलाई आफ्नो कर्ममा लागू गर्नुपर्दछ, तब मात्र हाम्रो प्रेमले निरन्तरता पाउने छ। हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो मात्र हित हेर्नुहुँदैन, आफ्नो प्रेम साथीको चाहनाको पनि ख्याल राख्नुपर्दछ। तपाईंले आफ्नो साथीको सुखलाई आफ्नो सुखभन्दा पहिला राख्नु पर्नेछ, तपाईंले निःस्वार्थ बन्नु पर्नेछ, आफूलाई दोस्रो स्थानमा राख्नु पर्नेछ तब मात्र तपाईंको प्रेम सफल हुने छ।
प्रेमको नियम (२६) : ‘संकेतलाई चिन्नुस्’
तपाईं आफ्नो साथीलाई ऊसँग प्रेम गर्छु भनेर कसरी जताउनु हुन्छ ? के तपाईं उनलाई फुल वा चकलेट उपहार दिनुहुन्छ ? के तपाईं उसलाई खाना खान बाहिर लिएर जानु हुन्छ या उसको लागि आफै कुनै खास परिकार बनाउनु हुन्छ ? के तपाईं उसलाई दिनमा दश पदक सम्म बताउनु हुन्छ, म तिमीसँग प्रेम गर्छु ? के उसले पनि तपाईंसँग यसै गरी दोहोर्‍याई रहन्छ ? यो पनि प्रेमको संकेत हो। तर वास्तवमा असंख्य तरीकाबाट यो कुरा जनाउन सकिन्छ कि तपाईं कसैसँग प्रेम गर्नुहुन्छ।
तपाईंको स्वास्थ्य बिग्रँदा तपाईंलाई एस्पिरिन ल्याएर दिएकी थिइन, या तपाईंले उ स्वास्थ्य महसुस गर्दा तपाईंको लागि फोन गरेकी थिइन। यदि यी छिटपुट, सामान्य, गैर महत्त्वका देखिने कुरा प्रेमको अभिव्यक्ति हैन भने आखिर के हो ? त्यो गर्नुको अरू कारण नै के थियो ? यो प्रेमको संकेत हो। तपाईंले संकेतलाई चिन्नु भएमा आपसी प्रेम मौलाउने छ।
प्रेमको नियम (२७) : नायक या नायिका बन्नुस्
हेर्नुस्, नायक या नायिका बन्नको लागि अझै पनि ढिलो भएको छैन। हर मानिसले समय-समयमा उनको रक्षाको लागि सुपर हिरो या महान नायक बन्ने जरुरी हुन्छ, यसैले जब कुनै खुँखार ड्रैगन ऊतिर बढिरहेको हुन्छ, तब कुनै जोडदार सेनाले हमला गरिरहेको छ या पानी भित्रको कुनै खतरनाक सुरुङमा छिर्ने जरुरत छ, तब मद्दतको लागि दौडनुस्। अहिलेको लागि यी मध्ये कुनै मौका आएन ? ठीक छ, हामी तपाईंको लागि एक अर्को अवसर खोज्छौं, जसबाट तपाईंले संसारलाई बचाउन सक्नुहोस् या कमसेकम आफ्नो प्रिय व्यक्तिलाई। तब अगाडि बढ्नुस्, आफ्नो आन्तरिक नायक खोज्नुस्। यो निर्णय लिनुस् तपाई भित्र कुन नायक छ र जहाँ तपाईंको साथीलाई तपाईंको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ बहादुरी देखाउन र अगाडि बढ्न नडराउनुस्।
प्रेमको नियम (२८) : ‘भिन्नता स्वीकार गर्नुस् ,समानता ग्रहण गर्नुस्’
यदि तपाईं सफल सम्बन्ध बनाउन चाहनु हुन्छ, जसमा तपाईंहरु दुवै सुखी रहनुहोस् र जो समयको परीक्षामा खरो उत्रियोस् तब तपाईंले यो तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईंहरु दुवै भिन्न हुनुहुन्छ। योभन्दा राम्रो तपाईंले यसलाई सिर्फ स्वीकार मात्र गर्ने होइन, बरु यसको लाभ पनि हेर्नुस्। पति फोनमा कुरा गर्नमा व्यस्त छ तपाई लेख्न बस्नु भएको छ। तपाईं मध्य एक आयोजना गर्नमा निपुण छ, दोस्रो सबैलाई याद गराउनमा माहिर छ, थोरै आराम गर्नु राम्रो हुन्छ। एक बच्चालाई जंगलमा घुमाउन निपुण छ, दोस्रो चित्रकारी र कथामा महारत हासिल गरेको छ। सम्बन्धको मतलब दुई मानिसको टिम हो र सबैभन्दा राम्रो टिममा अलग- अलग शक्ति भएका मानिस हुन्छन् व्यक्तिको रूपमा तपाई धेरै राम्रो हुनुहुन्छ- मिलेर तपाई अरू धेरै राम्रो गर्न सक्नु हुन्छ।
तपाईंले भिन्नतामा ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैन। यदि ध्यान केन्द्रित गर्नुछ भने साझा कुरामा गर्नुस्। साझा जोस र रुचि। तपाईं दुबैलाई पानीमा घुम्न, स्कैबल खेल्न, प्राकृतिक वृत्तचित्र हेर्न या आफ्ना साथीसँग भेट गर्न पबमा जाने या (चाहे जुनसुकै काम होस ) मजा आउँछ। हो, यसबाट साँच्चै फाइदा मिल्छ, यदि तपाईं केही कुरा सँगसँगै गर्न सक्नु हुन्छ- बच्चा हुर्काउने दृष्टिकोण, केही मनपर्ने कुरा र रुचि ती कुरा तपाईंले सम्हालेर राख्नुपर्छ, तर भिन्नता हुनु सहज कुरा हो। चाहे त्यसको कारणले कयौं पटक तपाईंलाई टाउको फुटाउन मन किन नलागोस्।
प्रेमको नियम (२९) : ‘आफ्नो साथीलाई नहोच्याउनुस्’
यो धेरै दुखद छ, तर म शर्त लगाउँछु, तपाईं यस्ता मानिसलाई चिन्नु हुन्छ होला, जसले यस्तो व्यवहार गर्छन्। म चिन्दछु, मेरो मतलब हो .. यस्ता मानिसलाई चिन्दछु। त्यसो त म यो काम कदापि गर्दिन, मेरो हिसाबमा यो धेरै नराम्रो कुरा हो। उ आफ्नो साथीलाई अरूको अगाडि होच्याउने गर्छ। उसलाई सानो र अबुझ महसुस गराउँछ। तपाईं अचम्ममा पर्नुहुन्छ, उसले उनलाई यति काम नलाग्ने सम्झन्छन्, तब उनीसँग किन बसिरहेका छन् हुन त मलाई लाग्छ, उनी जे भनिरहेका छन् त्यो सोचिरहेका छैनन्। उनलाई त बस आफ्नो साथीको अपमान गर्नमा कुनै प्रकारको आनन्द आउँछ। केही मानिस यो काम धेरै मात्रामा गर्छन्, भने केही थोरै मात्रामा। म ती मानिसलाई पनि चिन्दछु जसले यस्तो कहिलेकाहीँ मात्र गर्छन् किनकि उनीहरू कुनै सानो कुरामा आफ्नो साथीसँग रिसाउँछन्।
यो व्यवहार गर्ने कुनै तरिका छैन। कसैप्रति पनि यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन, खास गरी आफ्नो साथी प्रतित कदापि गर्नु हुँदैन। चाहे तपाईं ऊसँग रिसाउनु होस, तर तपाईंले आफ्नो फोहोर लुगा खुल्लामा सुकाउनु हुँदैन। यदि तपाईं अरूको अगाडि आफैमाथि काबु राख्न सक्नु हुन्न भने घरमा नै बस्नुस् र समस्या सुल्झाउनुस्। तर वास्तवमा तपाईं आफूमाथि काबु पाउनमा समर्थ हुनुपर्छ। अब प्रश्न उठ्छ आखिर कस्तो खालको विकृत दिमागलाई त्यो मानिसलाई नराम्रो महसुस गराउन र नराम्रो देखाउनमा आनन्द या सन्तुष्टि मिल्छ, जो सँग उ प्रेम गर्छ ? वास्तवमा आफ्नो प्रेम साथीलाई होच्याएर बोल्नु कदापि राम्रो हुँदैन। यसको परिणाम अकल्पनीय पनि हुन सक्दछ।
प्रेमको नियम (३०) : तपाई के गर्न चाहनु हुन्छ ?
पख्नुस् ! जब तपाईंले यो सम्बन्ध सुरु गर्नु भएको थियो, तब तपाईंले यस्तो कुराको कुनै बाचा गर्नु भएको थिएन, ठीक छ ? हो, मलाई लाग्छ, यो ठिक हो। तर सायद तपाईंले सूक्ष्म रूपमा पढ्न बिर्सनु भएको थियो। यदि तपाई कसैसँग प्रेम गर्नु हुन्छ भने यो तपाईंको दायित्व हो तपाई उसको सपना, महत्वाकांक्षा र योजना पुरा गर्नमा उनको मदत गर्नुस्। चाहे ती योजनामा तपाईंले केही अतिरिक्त मेहनत या कष्ट उठाउन जरुरी होस।
उ जे गर्न चाहन्छ, यदि त्यो तपाईंलाई मन पर्दैन भने के गर्ने ? हेर्नुस् यो निश्चित गरेपछि यो नियम धोका या आपराधिक गतिविधिमा लागु हुँदैन, तपाईंले अब यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ तपाईं प्रतिरोध किन गरिरहनु भएको छ। तपाईंलाई शंका व्यक्त गर्ने वा त्यसमा कुराकानी गर्ने पुरा अधिकार छ। उदाहरणको लागि, यदि साथी नोकरी छोडेर फेरी कलेज जान चाहन्छ भने चिन्तित हुन तार्किक छ, किनकि त्यो स्थितिमा आर्थिक स्थिति धेरै चिन्ताजनक हुनेछ तर कुराकानी यस्तो पक्षबाट हुनुपर्दछ जस्तो तपाई उसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। आफ्नो चिन्ता यसरी व्यक्त गर्नुस्, ताकि यस्तो तरिका निकाल्न सकियोस् उनलाई पढ्न दिएर पनि यो काम कसरी सम्भव बनाउने। सीधा- सीधा अस्वीकार गर्नु गलत कुरा हो। तपाईंको इच्छा हुनुपर्छ, तपाईंको साथीले त्यो सब हासिल गरोस्, जुन उ आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण मान्छ।
प्रेमको नियम (३१) : ‘आफ्नो रिसलाई राती सम्म रहन नदिनुस्’
यो धेरै सामान्य, हर दिनको नियम पनि हो, तपाईंले यस्तो हताश जनक कुरामा दुखी हुन जरुरी छैन। लगभग हामी सबै यात रिसमा मुख फुलाएर बस्छौं या रिसले चुर हुन्छौं। तपाईं यी मध्ये के गर्नुहुन्छ ? यदि तपाई रिसाउनु हुन्छ भने के आफ्नो सारा रिस बाहिर निकाल्नु हुन्छ या कयौं घण्टा या दिनसम्म बग्न दिनु हुन्छ ? त्यस्तो रिस, कुण्ठा तथा क्रोधको सामना गर्न हामी सबैको तरिका अलग अलग हुन्छ र तपाईंको साथीले जुन तरिकाले व्यवहार गर्छ त्यसको असर तपाईंमा पनि पर्छ।
कुनै सम्बन्धमा लगातार बहस हुनु ठिक हैन, तर कहिले काहीँको झगडा सधैँ नराम्रो हुँदैन- चाहे यो वयस्क व्यवहारको दायराभित्र गरिएको किन नहोस्। नियमको खेलाडीले कहिल्यै धम्की दिँदैन, अपमान गर्दैन सिर्फ चोट पुर्‍याउनको लागि आरोप लगाउँदैन, या यस्तो कुरा गर्दैन जसमा उसलाई पछि अपसोच होस तर प्रष्ट छ, यी सीमा भित्र तपाई समय समयमा बहस गर्न सक्नु हुन्छ।
प्रेमको नियम (३२) : क्षमा माग्न अगाडि रहनुस्
तपाईं सरी भन्ने बारेमा कस्तो महसुस गर्नु हुन्छ ? सायद तपाईंले बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईंले सरी किन भन्ने ? या के तपाईंलाई लाग्छ, तपाईं सानो हुनुहुनेछ, अपमानित हुनुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो अहमलाई एकातिर राख्नुपर्ने छ ? हेर्नुस् यस्तो नसोच्नुस्, तपाईंले नियमको खेलाडी हो र यति ठुलो सक्नु हुन्छ। हेर्नुस्, म तपाईंलाई ५०० मानिसको अगाडि सरी भन्न भनिएको छैन। तपाईंले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको प्रिय व्यक्तिसँग नितान्त निजी वातावरणमा माफी माग्नुपर्ने छ। यति तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं के कुराको लागि माफी मागिरहनु भएको छ ? के सरी भन्नु पाखण्ड हैन, जब तपाईंलाई साँच्चै महसुस हुन्छ, तपाईं सही हुनुहुन्थ्यो ? हैन, यस्तो हैन, किनकि तपाई सरी यस कारणले बोलिरहनु भएको छैन। तपाईं सरी यस कारणले बोल्नुभएको छ, किनकि आफ्नो दृष्टिकोणको बैध भिन्नतालाई यो बिन्दुसम्म तल आउन दिनुभयो। बहस गर्नमा दुई जनाको आवश्यकता हुन्छ र तपाईं यदि मूर्खतापूर्ण व्यवहार गरेकोमा माफी मागिरहनु भएको छ, तपाईंले यस्तो हुन दिनुभयो र ती सबै गल्तीको लागि पनि, जुन त्यो विन्दुसम्म पुग्नको लागि गरिएको छ।
याद राख्नुस्, तपाईं यसैले माफी मागिरहनु भएको छ, किनकि तपाईंले कुरालाई बढवा दिने अनुमति दिनुभयो र स्वितिलाई नाजुक बनाउनुभयो। तपाईं आफ्नो मूल राय या कार्यको लागि माफी मागिरहनु भएको छैन। जबसम्म प्रष्ट छ त्यहाँ पनि तपाईंले गल्ती नगरेको होस। यदि यस्तो हो भने तपाईंले त्यसको लागि माफी माग्नुपर्छ।
प्रेमको नियम (३३) : ‘हाम्रो अगाडि एक समस्या छ’
तपाईंका साथी खुसी छैन, यही आफैमा एक समस्या हो। कुरा सकियो। कारण के हो यसबाट केही फरक पर्दैन, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ या असहमत, तपाईंको हिसाबमा तपाईंको साथी मुखर, अतार्किक, हास्यास्पद, बेवकुफ या घटिया बनिरहेको छ। उ खुसी छैन, यो तथ्य एक समस्या हो र यो समस्या तपाईंको हो।
कृपा गरेर यो जालमा नफस्नुस्। हेर्नुस्, तपाईं नियमको खेलाडी हो यो कुरा तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ। यदि तपाईंको साथीले तपाईंसँग कुनै कुरा गडबड छ भन्छ भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुस्। म तत्काल नोकरी छोड्न, घर बदल्न, धेरै बच्चा जन्माउन, आफूसँग भएका बच्चाबाट छुटकारा पाउन खोज्नुस् भनी रहेको छैन या चाहे जे कुराले उनीहरूलाई दुःख दिइरहेको छ, त्यसलाई तत्काल हटाउनुस्। तपाईंले बस थाहा पाउन जरुरी छ यो साझा समस्या हो र तपाईं सामान्य तरिकाले साझा समाधानमा पुग्नुपर्छ।
सामान्य तरिका के हो ? ओह, तपाईंलाई यो थाहा छ। तपाईं कुराकानी गर्नुहुन्छ, बिचार विमर्श गर्नुहुन्छ र पत्ता लगाउनु हुन्छ यो समस्या किन छ र यसलाई सुल्झाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, ताकि तपाईंहरु दुवै यसको साथमा जिउन सक्नुहोस् के गर्न सकिन्छ, ताकि तपाईंहरु दुवै यसको साथमा जिउन सक्नुहोस् र यसले तपाईंहरु मध्ये कसैको लागि नयाँ समस्या खडा नगरिइदेओस्। सरी मैले भन्नुपर्ने थियो, ‘तपाईं दुवैको लागि कुनै नयाँ समस्या नल्याइदेओस्। किनकि, प्रष्ट छ बलियो सम्बन्धमा एउटै प्रकारको समस्या हुन्छ- साझा समस्या।
प्रेमको नियम (३४) : उसलाई सिंहासनमा नबसाउनुस् र उ त्यही बसिरहने आशा पनि नगर्नुस्
हामी मध्य केही मानिस आफ्नो साथीलाई सिंहासनमा बसाउन मन पराउँछन्। हामी उनलाई राजा या रानी मान्न थाल्छौं र उनको चरण चुमेर उनको पूजा गर्छौं। शायद तपाईं यसलाई चरम सीमा मान्नुहुन्न तर जब तपाईं कसैसँग प्रेम गर्नुहुन्छ तब आफूलाई विश्वास दिलाउन सजिलो हुन्छ उ पूर्ण रूपमा आदर्श छ। हेर्नुस्, उ आदर्श हुँदैन। आखिर उ पनि मानिस नै हो। ढिलो चाढो उ आम मानिसको जस्तो गल्ती गर्ने छ, गडबड गर्नेछ, फुडपनले काम गर्नेछ, राजा रानीको चरित्र अनुरूप व्यवहार गर्ने छैन। यो अवश्यम्भावी छ- तपाईं यो गर्नुहुन्छ, म यो गर्छु, सबैले यो गर्छन्। जुन देवता या देवीसँग तपाईंको प्रेम हुन्छ, उसले पनि यही गर्ने छ।
यदि तपाईं यो कुराको वास्तविकता थाहा पाउनु हुन्छ र स्वीकार गर्नुहुन्छ भने राम्रो कुरा हो। तर असलमा हामी मध्य दुबैमा आफ्ना देवी देवतासँग बेदाग व्यवहारको आशा गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यस कारण प्रियजनमाथि हाम्रो अपेक्षामा खरो उत्रनुको दबाब पर्छ। उ आफ्नो पूजा अर्चना मन पराउँछ (या नपराउन पनि सक्छ, हरेक मानिसको रोजाई एउटै हुँदैन) तब यदि तपाईं आफ्नो साथीको लागि एक सिंहासन राख्न चाहनु हुन्छ, जसमा उ समय (समयमा बस्न सक्छ भने ठीक छ। तर त्यहाँ उसलाई पुरा समय नबसाउनुस्। उसलाई आफ्नो मन खुसी आउने जाने अनुमति दिनुस् र जब उसले देवी देउताको जस्तो व्यवहार गर्छ तब त्यसको आनन्द लिनुस्। ती मौकाको पनि आनन्द लिनुस्, जब उ तल झरेर तपाईंको नजिक आउने छ र लापरवाह, जटिल, दैनिक जीवनको मानिसको जस्तो व्यवहार गरोस्, जस्तो असलमा उ छ। यसबाट उसको जीवन धेरै सजिलो हुनेछ र साँचो भन्ने हो भने यसबाट तपाईंको जीवन पनि धेरै रोचक बन्नेछ। कुल मिलाएर यसबाट तपाईंको सम्बन्ध वास्तविक बन्नेछ।
प्रेमका नियम (३५) : थाहा पाउनुस् कहिले सुन्नुपर्ने हो र कहिले काम गर्नुपर्ने हो
हामी मानिस पनि अनौठा जीव हौं। हामीलाई अरूबाट यो कुरा थाहा पाउने आवश्यकता पर्छ, हाम्रो प्रतिक्रिया र व्यवहार जायज छ। तपाईंको साथी तपाईंसँग यही माग गरिरहेको छ, तपाईंले उसको भावनालाई सामान्य मानेर पुष्टि गर्नुहोस्। यसैले उ धेरैजसो कुण्ठित हुन्छ, जब उसको पुरा कुरा सुन्नुभन्दा पहिला नै तपाई बोल्न थाल्नु हुन्छ, ‘राम्रो भयो। म अहिल्यै फोन गरेर तिम्रो त्यो सहकर्मीको दिमाग ठेगानमा ल्याउने छु।’ असलमा उनले यसो गर्न जरुरी छैन- यो काम उ आफैले पनि गर्न सक्छ। उ त तपाईंबाट बस यति नै सुन्न चाहन्छ, उ धेरै तीव्र प्रतिक्रिया गरिरहेको छैन या अतार्किक व्यवहार गरिरहेको छैन।
अब तपाईंले कसरी थाहा पाउने उसले के चाहेको छ- तपाईंको सहयोग लिन चाहन्छ या आफ्नो घमण्ड देखाउन चाहन्छ ? हेर्नुस् यदि तपाईं सुन्नबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ भने धेरै जसो यो आफै स्पष्ट हुन्छ। यदि उसले तपाईंलाई भनिरहेको छ, उ घर फर्कन ढिलो हुनेछ र बच्चालाई ल्याउन सक्ने छैन तब स्पष्ट छ, उसलाई त्यो क्षण के आवश्यक छ। यदि उ तपाईंलाई अफिसको घटना बताइरहेको छ भने उसले सल्लाह माग्न खोजेको पनि हुन सक्छ। यी संकेत यस्ता पनि हुन सक्छन्, ‘तिम्रो बिचारमा मैले के गर्नु उचित हुन्छ ?’ यदि उसले सल्लाह मागिरहेको छैन भने सायद उसलाई यो चाहिएकै छैन। तर यदि भएर पनि तपाईंलाई शंका छ भने तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, ‘तपाई सल्लाह चाहनु हुन्छ या तपाई आफ्नो मनको घमण्ड देखाउन चाहनु हुन्छ ? ’
प्रष्ट छ, पहिला उ मद्दत चाहन सक्छ र फेरी सुन्नको लागि कान (या यसको उल्टो पनि हुनसक्छ)। जब तपाईंको साथी आखिर कार त्यो ट्राफिक जामबाट निस्केर घर आउनेछ, तब मात्र तपाईं बच्चा। चिया, कुकुरको समस्या सुल्झाई सक्नु भएको हुनेछ। तर हुनसक्छ, अझै पनि उसले उसको कुरा सुन्नु होस् भन्ने चाहिएको छ। किन ? किनकि उसलाई यो कुरा पुष्टि गर्न तपाईंको आवश्यकता छ। उ एक कुण्ठाजनक, डराउने, विचलित गर्ने खालको। चिन्ता जनक। रिस उठाउने खालको अनुभवबाट अगाडि बढेको छ र तपाईं उ प्रति सहानुभूति राख्नु हुन्छ र उसले यसरी महसुस गर्नु पूर्ण रूपमा जायज छ।
प्रेमको नियम (३६) : कहिल्यै आकर्षक बन्न नछोड्नुस्
आफ्नो कपाल राम्रोसँग मिलाउने या सफा सुधार स्मार्ट लुगा लगाउने वास्तवमा यो काम गर्न मुश्किल पनि छैन। जरुरी छैन लुगा महँगो होस्। शायद तपाईंसँग मेकअप गर्ने समय पनि छैन होला या तपाईंले जिन्दगीमा कहिल्यै मेकअप गर्नु भएकै छैन होला। यदि तपाईं पुरुष हो भने सायद तपाईंलाई अनुहारमा थोरै दारी सधैँ राम्रो लाग्ला- तपाईंको साथीलाई पनि। यो त आफ्नो साथीप्रति सम्मान देखाउने कुरा भयो, तपाईं उसको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखिरहनु भएको छ। यो सही पनि हो- त्यही साथी नै हो जसले तपाईंलाई सबैले भन्दा धेरै हेर्छ। (जबसम्म तपाई ऐना अगाडि धेरै समय बिताउनु हुन्न)। यति मात्र हैन, तपाईं अझै पनि समय समयमा कुनै कोसिस गर्न सक्नु हुन्छ। मलाई थाहा छ, बिहान सधैँ समय हुँदैन। किनकि त्यो समयमा तपाईं खास व्यस्त हुनुहुन्छ। तर यति भएर पनि तपाईं खास मौकामा आफ्नो साथीको लागि खास पोषाक लगाउन सक्नु हुन्छ। सदा आकर्षक बन्ने प्रयास गर्नु पर्दछ।
प्रेम र विवाह बिचको अन्तर
हाईस्कुलमा कतिपय मेरा तरुण साथीले प्रेमलाई तिलाञ्जलि दिन नसकेर पढाई छाडे। मलाई पनि यौवनताले अलिंगन नगरेको होइन तर मैले योनेच्छालाई कैद गरेर भविष्यको उज्ज्वल बाटो खोजे। कलेज शिक्षा ग्रहण गरे पश्चात् मात्र शिक्षा र ज्ञानको सारभूत कुरा अवगत भएपछि बाँधिएको वैवाहिक सम्बन्धको गाँठोले जीवलाई सार र अर्थ पूर्ण बनाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिए। ….प्राकृतिक नियम हो तर नियन्त्रण बाहिरको होइन। स्रोत : जीवन इतिहास- मित्र ऐश्वर्या, भारत
चर्चित गायिका मोलिना राईसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ र उहाँ सँग नै विवाह बन्धनमा बाँधिने समय नजिकिँदै आएको आभास मिल्न थालेको छ। – युवा शिशिर श्रेष्ठ, नागार्जुन ‘७’
प्रेम र विवाहले मानव जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। हामी विवाहित जोडीलाई देख्दा पाउँदछौ की विवाह पछि प्रेम अलि कम हुँदै जान्छ कि तर पारिवारिक जीवन सफल बनाउन मानिसमा प्रेमको आवश्यकता पर्दछ। प्रेमलाई अत्यधिक प्रभावकारी रूपले अभिव्यक्ति गर्ने तपाईंको प्रयास, जीवन साथीको व्यवहारमा भर पर्दछ। आफ्नो जीवन साथीको प्रेमसुत्र जान्न र त्यसलाई स्वीकार गर्न उच्चतम प्रयासको आवश्यकता पर्दछ। प्रेम विभिन्न प्रकारका हुन्छन् तर विशेष रूपमा प्रेम शब्दले प्रेमी- प्रेमीका वा पति-पत्नीहरू बीचमा अन्तर आत्मा देखिनै द्रवित भएर बाहिर देखिन आउने भावनात्मक स्वरूप र क्रियाकलापहरू पर्दछन्। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने विवाह जीवनमा एक पटक गर्ने हो तसर्थ जससँग प्रेम सम्बन्ध छ, उसैसँग विवाह गर्नु उचित हुन्छ। विवाहित जोडीको सफलताको मूल सूत्र नै प्रेम हो, त्यसैले गर्दा प्रेम र विवाह बिच अत्यन्तै ठुलो अन्तर सम्बन्ध छ भन्दा, अत्युक्ति नहोला। पुस्तक : ‘प्रेम र विवाह’बाट
Tagsप्रेमका नियम रिचर्ड टेम्पलर